.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: မြန်မာစာလုံးလှလှလေးများ အစုံရပြီ
ကဲ ဒီနေ့တော့ Flash Song လုပ်တာ ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ရော..
Photoshop တို့ ဒီဇိုင်းလုပ်တာ ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ရော
မြန်မာဖောင့် လှလှလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ Download ပေးထားပါတယ်။
1. Metrix ၊ ဒီမှာနှိပ်ပါ။
2. ArtHouse ၊(Open&TrueType) ဒီမှာနှိပ်ပါ။
3. Win Myanmar2၊ ဒီမှာနှိပ်ပါ။
4. Shwe ၊ ဒီမှာနှိပ်ပါ။
5. Academy ၊ ဒီမှာနှိပ်ပါ။
6. Aeyar ၊ ဒီမှာနှိပ်ပါ။
7. CE ၊ ဒီမှာနှိပ်ပါ။
8. U4Myanmar ၊ ဒီမှာနှိပ်ပါ။
9. King ၊ ဒီမှာနှိပ်ပါ။
Font တွေကို ခေါင်းစဉ်အလိုက် ကိုးမျိုး တပ်ထားပါတယ်။ တစ်မျိုးစီမှာ Font
အရေအတွက် တော်တော်များများ ပါ ပါတယ်။ မြန်မာဖောင့် ၂၀၀ ကျော်ပါပါသည်။
Window + R နှိပ်လိုက်ပြီး ပေါ်လာသော Run ထဲတွင် Fonts ဟု ရိုက်ထည့်၍ Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
Fonts folder ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒီထဲမှာ Download ဆွဲချထားသော Font များကို .rar ဖိုင်ဖြည်ပြီးမှ
Copy & Paste လိုက်ပေးရုံပါပဲ။ ကီးဘုတ်ပုံကိုတော့ အောက်မှာ ယူနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက် ။ ။ ဤဖောင့်များကို ကျွန်တော် http://zaung.net/ မှ ဒေါင်းယူခဲ့ပြီးတော့
ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် Upload လုပ်ပြီး တင်ပေးထားပါသည်။
Posted by Thurainlin at 10:14